Barataa Daagmaawii Daawit: 'Barataa kutaa jahaa beekumsa Fiiziksii fi hawwaa addaa qabudha' - BBC News Afaan Oromoo
Image copyright Harmee Dagim/ Adde Haayimaanot Ayyalaa
Goodayyaa suuraa Barataa Dagamawii Daawit yeroo qayyabatu
Barataa Dagamawii Daawit jedhama. Dhalatee kan guddate magaala Dirree Dhawa yoo ta'u amma umuriin isaa waggaa 13dha. Beekumsaa inni Keemistirii, Fiziiksii fi saayinsii hawaa irratti qabu nama dinqisiisa.
Ammatti barataa kutaa 6tti. Amma barumsaa isaatti barataa ciimaadha. Dura garuu barumsa isaarratti dadhabaa ture. Kutaa keessaatti hin barreessu, hin dubbissu, gaafii hin gaafatu,deebiis hin deebissu jedhan harmee isaa aadde Haymanoot Ayyaala.
Aadde Haymanoot, barsiisoota isaas baayyee akka rakkisuu fi ijoollummaa isaatti nama waliin akka walii hin galle dubbatu.
Dabalataan ammoo ijoollee waliiniis hin taphatu jedhan. ''Yeroo ijoolleen taphatan inni immoo kitaaba Steefaan Hawkiing dubbisa. Guddinni isaa guddinna ijoollee biroo irraa garaagarumma qaba.''
Saayintistiin beekamaa Isteefan Howkiing boqote
Ijoollee waliin walii galuu dhabuu isaarra kan ka'e mana barumsaa keessaatti hiriiyaa tokko qofa qaba jedhan. manattis haadhaa fi abbaa isaa waliin waan hin dudubannef maatii isaaf yaaddoo ture.
"Guddinni isaa akkumma ijoollee biroo waan barbaadu hunda argaate guddate. Ijoollummaa isaatti akka ijoollee biroo taphatee hin guddanne. Inni meeshaalee daa'immaanii ittin taphataniin miti kan taphate guddate. Inni meeshaalee taphataaf hin mijoofneen taphata ture. Kun immoo nu hin gammachiisu ture. Inni bakka miilli itti baay'atu hin jaalattu. Ofii isaatti waan barbaaduun taphaata." Jedhan haati isaa addee Haymanoot Ayyaala.
Fiilmii Arabiffaa ilaaluu akka jaalatuufi booda barnoota isaa irratti dhiibbaa qaba jechuun akka isa hin ilaalle akka dhorkan harmeensaa BBCti himan.
Haa tahu malee tarkaanfichi jijiirama finne ture. Haati haalli mucaa ishee baayyee waan ishee dhiphisuuf yeroo hunda mana barnoota deemuun hordoofti ture. Haalli isaa fooyya'uu dinnaan mana barnootaa jijjirte kutaa tokko gadi buustee galchite.
Yeroo kutaa lammaffa baratu hamma ta'e fooyya'aa dhufe. Ganna yeroo kutaa lammaffaa baratu haadha isaa gabatee peeredikii bichisiisee gabatee peeredikii sirritti qo'aatee maatii isaaf ibsa ture.
Kuni immoo maatii isaaf waan adda ture. Sabaabinii isaas mucaan kun ciimina akkana agarsiisee waan hin beekneef. Booda irratti garuu haalli barnoota isaa jijiiramaa dhufe. Yeroo kutaa saddaffaa baratu jijiiramaa guddaa agarsiise. Amma kutaa isaatti sadarkaa 3-10tti ba'a.
Amma mana barnoota keessatti bartoota sadarkaa barnootaan isaa ol ta'aniifi gosa barnoota keemistiirii fi fiziiksii qo'achiisa. Waa'ee saayinsii hawaasa ni ibsaaf.
Barataa kana wanni adda godhu beekumsa inni saayinsii uumaama kan akka keemistiirii, fiziiksii fi saayinsii hawaa irratti qabudha.
Image copyright Harmee Daagim Aadde Haayimanot Ayyalaa
Goodayyaa suuraa Barataa Dagamawii Daawit yeroo barattota qayyabachiisu
Kunis immoo waan ijoollee sadarkaa barnoota kanaa fi umurii kana keessa jiraan irraa waan eegamu miti. Keessatiyyuu beekumsi inni saayinsii hawaa irraatti qabu waan baratoonni sadarka digirrii fi achi oli ni qabatu jedhame eegamudha.
Dr Geetnaat Fallaqaa qoraata fi barsiisaa yunivarsiitii Finfineeti. Akka Dr Geetnat jedhutti beekumsa mucaan kun umurii kanatti qabu waan rajiidha.
" Barataa kana argeenii dubbisee jira. Saayinsii gad-fageenya qabu dubbata. Waa'ee Fiziiksii Kuwaantamii fi Hawaa akka gaaritti beeka. Namoonni baayyee waa'ee Wantootaa hamma atoomii jiru beekani. Inni garuu sadarkaa atoomii irrraa gad darbee jira.
Wanni inni dubbattu nama saayinsii sirrittii hin hubanneef wanni inni dubbatu galuufi dhabuu danda'a. Namoota akka keenyaa ogummaa saayiinsii kana keessa jiraniif hubachuuf salphaadha. Waan baayyee nama dinqudha."
Akka barataan kun jedhutti wanni gosa barnootaa kanatti isaa kakase hojiiwwaan Profesaar Stefaan Hawkiingdha. Kunis yeroo wagga sagal jirutti. Bashananaaf deeme filmii seenaa Profesaar Stefaan Hawkiing irraatti hojjatame eega argee booda. Filmii keessaatti bu'a bayii inni keessa darbe sun baayyee akka isaa kakase dubbatta.
Kunis immoo innis akka saayiintistoota biroo saayinsii qoraate gama saayinsii hawaatiin addunyaa kanaaf waan tokko gumaachuu akka dandaa'uuf isaa kakase.
Achii booda abbaan isaa kitaaba Stefaan Hawkiing kan 'The grand planetary' jedhu waa'ee 'black hole' irraatti barreefame kenneef.
Achii booda gara kitaaboota isaa dubbisuufi hojiiwwaan isaa admasuutti ka'e. Amma manaa teleskoppii fi kitaaboota saayiinsii hedduu qaba. Kunis akka inni beekumsa isaa ciimsatuuf isaa gargaree jira.
Gargaarsa teleskoppii isaatiin 'Astirooyiidota fi Koomeetoota baayyee arge jira. Isaan keessa 'Holly Comet' kan jedhamtu argee jira. Kunis xiqqaate wagga 79 keessaatti al-tokko lafa nannaa'e kan dhufudha.
Pilaneetiin kun Pilaneetii keenyaa irraa baay'ee hin fagatu. Kunis dura Pilaneetii Veenuus irraa nanna'a booda immoo pilaneetii keenyaa dhumaarratti immoo yeroo Maarsii nannaa'u ji'a lama keessatti al-tokko nanna'a.
Daagim haala kanaan beekumsa saayinsiif qabu gabbifataa jira.
Saayintistiin beekamaa Isteefan Howkiing umurii 76'tti boqote
Barsiisaan Keeniyaa badhaasa barsiisota addunyaa doolaara mil. 1 mo'ate